Uhlalutyo olulinganisiweyo lubhekisela ekumiselweni kweliphi iqela elinikeziweyo elikhoyo kwisampuli. Ubungakanani bungabonakaliswa ngokwemigangatho, ubuncinci, okanye ubuninzi belixa linye okanye zonke izakhi zesampuli. Nazi iziphumo ezimbalwa zesampula zohlalutyo oluninzi:
I-Ore iqulethe i-42.88% yesilivere ngobunzima.
Ukuphendula kwamakhemikhali kwavelisa i-3.22 i-moles yemveliso.
Isisombululo ngu-0.102 M NaCl.
Uhlalutyo olulungileyo luchaza 'yintoni' kwisampuli, ngelixa uhlalutyo olulingelwayo lusetyenziselwa ukuxelela ukuba 'lukhulu kangakanani' kwisampuli. Iindidi ezimbini zokuhlalutya zivame ukusetyenziswa kunye kwaye ziqwalaselwa njengemizekelo yekhemistry yokuhlalutya.
Izindlela ezisetyenziselwa ukuhlalutya okwenziweyo
Zininzi iindlela ezisetyenziselwa ukulinganisa isampuli. Ezi zinokuthi zihlulwe ngokubanzi njengendlela yokwenza umzimba okanye yeekhemikhali.
Iindlela zokwenyama zilinganisa impahla ephathekayo, njenge-adsorption of light, ukuxininisa, kunye nokuthinteka kombane. Imizekelo yeendlela eziphathekayo ziquka:
I-Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
I-Atomic Emission Spectroscopy (AES)
Amandla e-X-ray Spectroscopy (EDS)
i-ray-ray fluorescence i-spectroscopy
Izindlela zeMichiza zibandakanya ukusabela kwamakhemikhali, njenge-oxidation, imvula, okanye ukungathathi-mandla ukwenza i-chemical compound entsha. Imizekelo yeendlela zamakhemikhali ziquka:
I-Titration (uhlalutyo lwe-volumetric)
Iimvavanyo zamachiza ezahlukahlukeneyo
Inert fusion gas
Ngokuqhelekileyo iindlela zenyama kunye neekhemikhali ziyaqhubeka. Ukongeza, iimathematika zisetyenziselwa uhlalutyo olulinganisiweyo. Izibalo zibaluleke kakhulu ekuhlaziyeni idatha.
Isixhobo esiyinhloko sokuhlalutya okwenziwe ngumlinganiselo wokuhlalutya okanye isixa, esetyenziselwa ukulinganisa ubunzima ngokuchanekileyo.
I-Glassware, efana nebhola yokuvutha, ibalulekile. Ukusebenzisa imichiza yokuhlalutya , ibhalansi yokulinganisa isilinganisi esilinganisela kwi-0.1 ye-milligram. Uvakalelo malunga nexesha eliphindwe mawaka lufunekayo kumsebenzi we-microanalytical.
Kutheni kubalulekile ukuhlalutya ngokuchanekileyo
Kubalulekile ukwazi ubungakanani bazo zonke okanye inxalenye yesampuli ngezizathu ezininzi.
Ukuba ukwenza ukuphendula kweekhemikhali, uhlalutyo oluninzi lunceda uqikelele ukuba umlinganiselo kangakanani umkhiqizo onokulindela kwaye uzimisele ukuvelisa isivuno sakho.
Ezinye iimpendulo zenzeka xa uxinzelelo lweqela elinye lifikelela kwizinga elibucayi. Ngokomzekelo, ukuhlalutya kwezinto ezinokusasaza kungabonisa ukuba kukho okwaneleyo kwinqanaba eliphambili kwi-specimen ukuba ihambe ngokukhawuleza!
Uhlalutyo olulinganisiweyo lubalulekile ekuqulunqweni nasekuhlolweni kokutya kunye neziyobisi, njengoko kusetyenziswa ukulinganisa amanqanaba ezondlo kunye nokubonelela ngokuchanekileyo kokubalwa kwemilinganiselo.
Kubaluleke kakhulu ekuqaliseni izinga lokungcola okanye ukungcola kwesampuli. Nangona uhlalutyo olulungileyo lunokukwazi ukucacisa ubukho bezinto eziphambili kwipayipi kumdlalo wokudlala, umzekelo, uhlalutyo olulinganisiweyo olufumanisa ubuninzi beengcambu.
Uvavanyo lwezonyango luxhomekeke kuhlalutyo oluninzi ngolwazi malunga nempilo yesigulane.
Ngokomzekelo, uhlalutyo olulinganiswa lunokumisela amanqanaba e-cholesterol yegazi okanye umlinganiselo weepoprothein kwi-plasma okanye inani leprotheni elixutywe emcinini. Naphinda kwakhona, uhlalutyo oluninzi luzalisa uhlalutyo olulinganiswayo, kuba oku kulandela ukuchaza uhlobo lweekhemikhali ngelixa umntu wangaphambili uxelela ukuba uninzi kangakanani.
Iimvavanyo ezinomlinganiselo wamaminerari zingasetyenziselwa ukuchonga ukuba ngaba kuyasebenza ukwenza loo nto ibe yinto ethile okanye iqela.
Iimvavanyo ezixhasayo zisetyenziselwa ukuqinisekisa ukuba iimveliso zidibana nomenzi okanye iinkcukacha zokulawula.
I-Energy Energy Definition kwiSayensi
I-Spectrum Impact Definition
I-Oxidant Definition kwiKhemistry
Yintoni eqhutywe ngayo amalahle kwaye isebenza njani?
Le Ump iphuma
Ukuvula iMicdonald's yokuqala
Indlela yokukhetha iSikolweni esiphakeme kwi-Internet
Dala ifomu leDelphi kwiString
Iqabane leSahlulo seNtsapho yama-atheist are among the lowest in America
Indlela yokudibanisa isenzi esingaqhelekanga sesiFrentshi 'Servir'
Amaphephancwadi angama-80 aMagqabi aMnandi kwiMinyaka eyi-80 yokugqibela
Iindlela zokuphumelela ekubhaliseni naseNtetho